Google Maps ကိုယခု KML အထောက်အပံ့ဖြင့် | Martech Zone
ဂူးဂဲလ်မြေပုံသည် KML အထောက်အပံ့ဖြင့်ယခုဖြစ်သည်
ကြာသပတေးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 7, 2006 ကြာသပတေးနေ့, ဇွန်လ 12, 2014 Douglas Karr
ဤကဲ့သို့သောအချိန်များသည်ကျွန်ုပ်သည် geek ဖြစ်ကြောင်းသိသည်။ ဒီနေ့ Google Code ဘလော့ဂ် ယခုသူတို့သည် KML ဖိုင်များကိုထောက်ပံ့နေသည်ဟုကြေငြာလိုက်သည်။
ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူး! ငါထွက်ပေါက် freakin! မြေပုံပေါ်ရှိအချက်များကိုအစီအစဉ်ချထားရန်ယခင်ကလုပ်ခဲ့သည့်နေရာတွင်ယခုတွင်သင်သည် KML ဖိုင်ကို 'point' လုပ်ရုံသာ ဖြစ်၍ Google Maps သည်၎င်းတို့မြေပုံပေါ်တွင်အလိုအလျောက်စီစဉ်လိမ့်မည်။
ဤတွင် KML ဖိုင်နမူနာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Doug သူတို့ Au Bon Pain ကိုဒီမှာပဲဖွင့်လိုက်တာသိလား။
ဂူဂဲလ်မြေပုံများကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ် KML ဖိုင်ကိုရှာဖွေရန်မြေပုံကိုသာညွှန်ပြသည်။
နောက်ဆုံးတော့ Wow ပါ။ (ငါမျှော်လင့်တယ်!)
အလေးအနက်ထားရှေးရှေး။ XML သည် universal data format တစ်ခုဖြစ်သော KML (ဘယ်) ဖြစ်သည် is XML သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပထဝီဆိုင်ရာအချက်အလက်ဖလှယ်မှုပုံစံဖြစ်သည်။ ဤသည်ရှေ့ဆက်အလွန်ကြီးစွာသောခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အခြား GIS ပရိုဂရမ်များကို အသုံးပြု၍ လူများသည် KML ဖိုင်များကိုထုတ်ယူနိုင်ပြီးဂူဂဲလ်မြေပုံများဖြင့်အွန်လိုင်းကိုရိုးရှင်းစွာဖွင့်နိုင်သည်။
Tags: google sitemap+ googleKMLkml ဖိုင်မြေပုံအညွှန်းsitemap.xml
ဒီဇင်ဘာ 7, 2006 မှာ 1: 37 AM
မင်းအသံကောင်းတယ်... kml ဖိုင်တစ်ခုလုပ်နည်းကို ညွှန်ပြရုံနဲ့ ငါလုံးဝသဘောတူမှာပါ...
ဒီဇင်ဘာ 7, 2006 မှာ 11: 08 AM
အမှတ်ကောင်း။ ပို့စ်ကို လမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့ အပ်ဒိတ်လုပ်မယ်၊ ငါတင်ထားတဲ့ KML ဖိုင်ကိုဖွင့်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံကို မြင်ရမှာပါ။ KML ဖိုင်သည် စာသားအကြမ်းဖြစ်သည်။ အပြင်မှာ KMZ ဖိုင်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ၎င်းတို့သည် ပိုမိုမြန်ဆန်သော လွှဲပြောင်းမှုအတွက် ဇစ်ဖွင့်ထားသည့် KML ဖိုင်များ (သင့်တွင် ကြီးမားသောဖိုင်တစ်ခုရှိလျှင်)။
7:2006 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 2, 50 တွင်
7:2006 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 4, 19 တွင်
ကျွန်တော်ပြောရန်မေ့သွားသောမှတ်စုတစ်ခုမှာ KML ဖိုင်ကိုလည်း Google Earth ဖြင့်ပြင်ဆင်နိုင်ပြီး၊ အခမဲ့ GIS desktop application တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးထွက် beta ကို ဤနေရာတွင် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။
မတ်လ 2, 2007 မှာ 3: 29 AM
KML-ဖိုင်ကိစ္စသည် အဘယ်ကြောင့် ထိလွယ်ရှလွယ်ဖြစ်သနည်းဟု တွေးတောနေမိသည်။ အကယ်၍ သင်သည် စာလုံးအသေးစသည့် စာလုံးများပါသော တဂ်များဖြင့် XML ဖိုင်ကို ဖန်တီးပါက၊ XML/KML အလုပ်မလုပ်ပါ။ (အဲဒါပေါ့ :D)
မတ်လ 2, 2007 မှာ 8: 37 AM
ဒါကိုလည်း ကျွန်တော် သတိထားမိတယ်။ geotag နဲ့အတူတူပါပဲ။ စံနှုန်းတစ်ခုတွင် စာလုံးကြီးကြီးများကို အမှန်တကယ် အဘယ်ကြောင့် သတ်မှတ်ကြမည်ကို ကျွန်ုပ်မသိပါ။ စာလုံးသေး (အပေါ်ထက်) ထက်စာရင် ဘေးကင်းတယ်လို့ အမြဲတွေးဖူးပေမယ့် ဒီဝန်ဆောင်မှုတွေထဲက တချို့ကတော့ တကယ်ကို အံသြစရာကောင်းပါတယ်။
မတ်လ 9, 2007 မှာ 10: 39 AM
အလုပ်မလုပ်တဲ့ XML ကို အလုပ်လုပ်တဲ့ KML ဖိုင်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ XSL ဖိုင်နဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့ အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်ပရိုဂရမ် (xt.exe) အနည်းငယ်ကို ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။
XSL ဖိုင် (စတိုင်စာရွက်) တွင် အလုပ်လုပ်သော xml ၏ အခြေခံကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ကျွန်ုပ်သည် စာလုံးကြီးတဂ်များကို စာလုံးကြီးဖြင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အလုပ်လုပ်သော xml-file (xml to kml) တွင် အမည်ပြောင်းခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် သင်သည် အလုပ်လုပ်သော kml ဖိုင်ကို ရရှိမည် 🙂
မေလ 12, 2007 မှာ 1: 38 AM
အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် မမြင်ခဲ့ရပါက၊ google mymaps အသစ်သည် သင့်အား မြေပုံတစ်ခုတည်ဆောက်ပြီး kml ဖိုင်ကို ထုတ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ပြီးတော့ google api က host kml ဖိုင်ကနေ တည်ဆောက်ထားတဲ့ သင့် site ပေါ်မှာ မြေပုံတစ်ခုကို ဖန်တီးလိုက်ရအောင်... အားလုံးက ပိုလွယ်လာပါပြီ။